Thu, May 28, 2020 at 3:07pm
निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा एमबीबीएसका विद्यार्थीलाई अध्ययन गराउन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् । सरकारले तोकेको मूल्यमा अध्ययन अध्यापन गराउन नसक्ने भन्दै उनीहरूले मन्त्रालयको नेतृत्वलाई नै चुनौती दिएका छन् ।
अध्यक्ष अन्सारीले तलब बढेको, महँगी बढेको अवस्थामा कलेज टाट पल्टिने बाहेक केही नहुने भएकाले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा पढाउन नसकिने बताउनुभयो । उहाँले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई ठग र माफियाको बिल्ला भिराएकोमा आपत्ति जनाउँदै देशकै लागि केही गरौँ भनेर मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । महासचिव डा. शर्माले भन्नुभयो, “सरकारले ४२ लाख ४५ हजार रपियाँ शुल्क तोके पनि हामीले ४९ लाख ९० हजार रुपियाँ लिएकै हौँ । टेबुलमुनिबाट होइन माथिबाट नै बिलै काटेर पैसा उठाइएको हो ।”
कार्यक्रममा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुरेश कनोडियाले एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क निर्धारण गरेको सरकारले सीईओ पठाइदिए कलेज सञ्चालन गर्न दिने बताउनुभयो । कार्यक्रममा कानुनविद् ओमप्रकाश अर्यालले मेडिकल कलेजहरूले अवैध रूपमा शुल्क उठाएको बताउनुभयो । चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता डा. सुजन कडरियाले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले हामी चलाउन सक्दैनौँ भन्दै सरकारलाई साँचो बुझाएको अवस्थामा सबै निजी मेडिकल कलेज सरकारले राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गोरखापत्रबाट